Sajhasabal.com |आजको बिदेशी मुद्राको विनिमय दर कति छ ? हेर्नुहोस
आजको बिदेशी मुद्राको विनिमय दर कति छ ? हेर्नुहोस
कात्तिक ४, काठमाण्डौ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ १३ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर ११३ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको थियो ।
कतारी रियाल आज १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ । हिजो पनि खरिददर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको थियो ।
यस्तै साउदी रियाल आज एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको थियो ।
यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ०७ पैसा छ । हिजो आइतबार पनि खरिददर ३० रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ०७ पैसा थियो ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ १२ पैसा बिक्रीदर २७ रुपैयाँ २६ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर २७ रुपैयाँ १२ पैसा बिक्रीदर २७ रुपैयाँ २६ पैसा थियो ।
। बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०१ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३ सय २ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३०१ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३ सय २ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको थियो ।
कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६८ पैसा पुगेको छ । हिजो खरिददर ९ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको थियो ।
कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७३ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३७४ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको थियो ।